Hoodichi garee bulchituu Habashaa, soda gubbaa fi abootee sibiilan akka mo’an tajaajila bahe. Ummatichi nambiyyoota lubbuu ofii fi dantaa sabichaa irratt gonka mirga guutuu qaban hin turre. Gabbaarii gibiraa baaftuu fi bulchoota gaaffii malee tajaajiltu turan jechuu dha. Qeesoti, hoodichaa fi balaa yoo ciicatan gubbaa itt dhufuu dandahu sammuutt gad hudumuun yoo bulchoota,keessaayyuu mootichaa sarmuu didan cubbuu akka tahu sodachisaa turanii. Jaarra arfan darban keessa angoon mootii Habashaa nagaan tokko irraa kan biraatt darbee hin beeku. Moototi namoota mootii of godhaniin finqilchamu turan. Sodaa haaloo bahannaa gubbaa dhufuun,abba tokkoota xaranga’oo homaa hin sodaanneen malee sochiin ummataa bulchoota irratt godhaman hamma hin jirre turan. Sochooti 1960moota keessa Goojjam ture illee hammina Bulchaa Muumicha TSahaayuu Inqusillaasee irratt kan xiyyeeffate malee Mootii Moototaa hin laalu ture.